Minisitry ny Fitaterana : Namaha ny olana napetraky ny MICTSL -
AccueilSongandinaMinisitry ny Fitaterana : Namaha ny olana napetraky ny MICTSL
12/12/2017 admintriatra Songandina 0
Taorian’ny olana izay nampifanditra ny dokera sy ny orinasa Mictsl, izay nitarika fitohanan’ny maro tamin’ ireo mpampiasa ny fadin-tseranana ao Toamasina, izany hoe niteraka fahataran’ny fampidirana sy ny famoahana ny entana, ary ny fanaterana izany amin’ny fotoana nifanomezana . Nandray ny andraikiny ny teo anivon’ ny minisiteran’ ny Fitaterana sy ny fahalalana ny toetr’andro amin’ ny alalan’ny tale rezionalin’ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro (DRTM), mba hitady vahaolana manoloana ny zava-mitranga. Noho izany dia niroso tamin’ny fihainoana ny roa tonta izay hipetrahan’ny olana ny DRTM nijerena ny fototr’olana. Nisy ihany koa ny fivoriana izay notanterahin’ ny tompon’andraikitra rehetra tany an-toerana, izay nijerena ny asa tanterahina eo anivon’ ny sampandraharaha voakasik’izany. Efa nisy ihany koa ny dika tsy ofisialy milaza ny fitarainana nomena ireo tompon’andraikitra ifotony ny (24 volana 2017) ,ary dia miara-dalana amin’ izany ny fametrahana fe-potoana herinandro ho an’ ny MICTSL mba hamahana ny olana. Ankoatra izay dia fitarainana maro avy amin’ ireo mpandraharaha, ary teo ihany koa niaraka amin’izany ny dikan’ ny valitenin’ny minisitera, izay nahafahana nanatanteraka fihaonana tamin’ ny SPAT ny 30 novambra 2017.
Taorian’ ny antso fanairana izay nataon’ ny fikambanan’ny mpitatitra, ny avy amin’ ny fandin-tseranana, ireo mpiara-miasa amin’ny fadin-tseranana nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, dia avy hatrany dia niroso tamin’ny fivoriana avy hatrany teo ambany fitarihan’ny SPAT ny rehetra ny faha-07 ny volana desambra teo . Izany fivoriana izany dia niarahana tamin’ ireo kaompaniam-pitaterana an-dranomasina rehetra, ahafahana mametrapetraka ny fiantsonan’ny sambon’izy ireo manoloana ny fahabetsahan’ny sambo tonga, ireo kaompania kosa dia tsy afaka mampakatra ireo kaontera tsy misy entana, izay naverin’ ireo mpanjifa azy.
Manoloana ireo olana rehetra ireo dia nisy avy hatrany ny delegasionina avy aty amin’ny foibe, izany hoe ny minisiteran’ ny Fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro izay notarihin’ ny minisitra Beboarimisa Ralava, mba hitafa amin’ ireo voakasiky ny olana ahafahana mitady ny vahaolana. Nandritra ny fihaonana dia nanambara ny minisitry ny Fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro fa tokony ho fomba fanao hatrany ny fifampiresahana alohan’ ny fandraisana fanapahan-kevitra, alohan’ ny hirosoana amin’ ny fitokonana. Noho izany taorian’ny tafa izay niarahana tamin’ny minisitry ny Fitaterana io ihany, dia nanapa-kevitra ny hampiato ny fitokonany aloha ireo mpitatitra sy ireo mpandraharaha misahana ny famoahana sy ny fitaterana ny entana, na ny “transitaire’’. Manoloana izany ihany koa dia nanaiky ny hisokafan’ny fiantsonan’ny kaontenera ho 5 hatramin’ ny 7 andro ny MICTSL. Nanapa-kevitra ihany koa ity orinasa ity ny amin’ ny hampiasana fibatana entana vonjy maika, mandra-pahatongan’ny fanatsarana ny fiantsonana, ary hametraka ihany koa ny fenitra amin’ny fampidinana ny kaontenera izay tonga ao amin’ny seranan-tsambon’ i Toamasina.